Efa Tafiakatra ao anaty Aterineto avokoa ireo Vokatry ny Fitsapankevitra avy amin’ny Filankevitra · Global Voices teny Malagasy
Efa Tafiakatra ao anaty Aterineto avokoa ireo Vokatry ny Fitsapankevitra avy amin'ny Filankevitra
Find out what the Council had to say!
Voadika ny 15 Novambra 2018 16:12 GMT
Efa nahazo ny rohin'ireo vokatra ireo tao amin'ny D21 tamin'ny alàlan'ny mailaka ny rehetra mandray anjara anatin'ny Filankevitry ny Vondrompiarahamonina andinihana ny Hoavin'i Global Voices, kanefa anatin'ny rakitra misokatra ho an'ny daholobe dia indro avoakanay eto amin'ny vohikalan'ny Vondrompiarahamonina ireo vokatra feno tamin'ireo fitsapankevitra efatra:
Filankevitra 2018 Adihevitra #1: Lohahevitra sy Fifantohana
Teboka voalohany natrehan'ny Filankevitry ny Vondrompiarahamonina 2018 momba ny Hoavin'ny Global Voices ny Lohahevitra sy ny Fifantohana. Vakio ny Taratasy feno momba ilay adihevitra: Taratasy voalohany momba ny adihevitra ao amin'ny Filankevitry ny Vondrompiarahamonina: Lohahevitra sy Fifantohana…
Filankevitra 2018 Adihevitra #2: Haavon'ny Mahamatihanina
Teboka faharoa natrehan'ny Filankevitry ny Vondrompiarahamonina 2018 momba ny Hoavin'ny Global Voices ny Haavon'ny Mahamatihanina. Vakio ny Taratasy feno momba ilay adihevitra: Taratasy faha-2 momba ny adihevitra ao amin'ny Filankevitry ny Vondrompiarahamonina: Haavon'ny Mahamatihanina…
Filankevitra 2018 Adihevitra #3: Rafitra Fandaminana
Teboka fahatelo natrehan'ny Filankevitry ny Vondrompiarahamonina 2018 momba ny Hoavin'ny Global Voices ny Rafitra Fandaminana. Vakio ny Taratasy feno momba ilay adihevitra: Taratasy faha-3 momba ny adihevitra ao amin'ny Filankevitry ny Vondrompiarahamonina: Rafitra Fandaminana…
Filankevitra 2018 Adihevitra #4: Famatsiana ara-bola
Teboka fahefatra natrehan'ny Filankevitry ny Vondrompiarahamonina 2018 momba ny Hoavin'ny Global Voices ny Famatsiana ara-bola. Vakio ny Taratasy feno momba ilay adihevitra: Taratasy faha-4 momba ny adihevitra ao amin'ny Filankevitry ny Vondrompiarahamonina: Famatsiana ara-bola…
Ireo pejy efatra ireo no teboka goavana noresahina nandritra ny filankevitra. Hitanareo anatin'ny pejy tsirairay ny famintinana fohy ny adihevitra, ireo rohy mankany amin'ny antontan-taratsy feno misy ny resaka izay andalinana azy ireo tsirairay avy, ary ireo vokatra amin'ny antsipiriany avy amin'ny fitsapankevitra mifanaraka aminy.
Raha nanapa-kevitra ny tsy handray anjara anatin'ny filankevitra ianareo, nefa liana ny amin'ny fizotrany, manasa anareo hanopy maso! Indraindray mahatalanjona, indraindray mahagaga, indraindray kosa araka izay noeritreretinay mpikambana ato anatin'ny ekipa fototra ireo vokatra ireo.
Manana hevitra momba ny làlana hizoran'ireo vokatra ireo ve ianareo?
Te hanentana ny rehetra izahay, indrindra ireo ao anatin'ny filankevitra, hizara ny eritreriny mikasika ireo vokatry ny fitsapankevitra ireo. Inona no hitanareo rehefa jerenareo miaraka ireo valinteny rehetra ireo? Inona no ambarany momba ny hoavin'ny GV? Inona ireo anatra goavana atahoranareo mety ho voadinganay?
Raha manana hevitra tahaka izany ianareo, miangavy anareo mba hizara azy! Manentana anareo aho hanao lahatsoratra vaovao ao amin'ny Bilaogin'ny Filankevitry ny Vondrompiarahamonina (tokony efa samy manana kaonty avy ireo mpikambana ao amin'ny filankevitra) ary hanazava ny fijerinareo. Mba hampanintona kokoa ny lahatsoratrao, avereno ampiasaina fotsiny ireo pikasary tamin'ny vokatry ny fitsapankevitra miraikitra amin'ireo pejy tsirairay voalaza etsy ambony.
Raha toa kosa ka mety aminareo kokoa ny mizara ny hevitrareo ao amin'ny Vondrona Google an'ny Filankevitra (na any an-toeran-kafa) azonareo atao tsara ihany koa ny manao izany.
Na izany na tsy izany, liana dia liana ny amin'izay zavatra tianareo ambara izahay, ary manantena fa maro aminareo no hikaroka ka hizara ny eritreritrareo mba ahafahanay mampiditra izany anatin'ny fanadihadianay manokana, izay hozarainay tsy ho ela!
4 ora izayAzia Atsimo
5 ora izayOseania